Raees oo noqday filimka loogu xadista badnaa dhanka Internet-ka 2017 iyo filimada kale ee la xaday – Filimside.net
Raees oo noqday filimka loogu xadista badnaa dhanka Internet-ka 2017 iyo filimada kale ee la xaday
Taariikhda: January 19, 2018
Dhaca ama xaddista loo geest filimada dhanka Internet-ka waa mid xadka ka baxday kaliya fanka Hindiya dhac looguma geesto Internet-ka xitaa shirkadaha Hollywood-ka ayaa qaati ka taagan in aflaantooda Internet-ka la isku weedaarsado hab xatooyo ah.
Shirkada Jarmalka ah ee dhinaca tiknoolajiyada xogta Internet-ka lagu wadaago qaabilsan TECXIPIO GmbH, ayaa soo saartay daraasad rasmi ah oo ay ku cadeesay in Bollywood King Khan Shah Rukh Khan filimkiisa Raees uu ahaa midka loogu xadista badnaa Internet-ka sanadii 2017 aflaanta Hindiya daraasad u gaar ah.
Shirkada TECXIPIO GmbH, waxay sheegtay in filimka Raees xogtiisa la xaday la isku weedaarsaday barnaamijka P2P networks in ka badan 6.2-milyan oo jeer!
Hrithik Roshan filimkiisa Kaabil oo isagana filimka Raees tiyaatarada lala saaray sanadkii hore xogtiisa daawashada filimkan la xaday waxaa Internet-ka la isku dhaafsaday 5.26-milyan oo jeer.
Akshay Kumar filimkiisa Jolly LLB 2 oo isagana bishii labaad 2017 la daawaday ayaa sedexaad soo galay aflaanta Hindiga ah ee Internet-ka lagu xaday waxaana daawashadiisa la is dhaafsaday 4.43-milyan oo jeer hab Online ah.
Sidoo kale Toilet Ek Prem Katha ayaa booska 4-aad soo galay aflaanta la xaday 4.27-milyan oo jeer ayaa Internet-ka la isku dhaafsaday halka Golmaal Again oo booska 5-aad ku jiro isagana 3.83-milyan oo heer la isku dhaafsaday Internet-ka.
Raees iyo Kaabil dalalka ay caanka ka noqdeen 2017 sidoo kalena dadka ku nool ay xatooyo ahaan Internet-ka ka daawadeen waa India, Pakistan iyo Saudi Arabia.
Jolly LLB 2, Toilet – Ek Prem Katha iyo Golmaal Again iyagana waxay caan ka ahaayeen oo xogtooda Internet ahan lagu kala xaday halka ugu badneyd dalalka India, Pakistan iyo UAE/GCC.
Sidoo kale filimada kale ee 10-ka ugu sareeyo soo galeen kuwa xatooyada Internet-ka loogu geestay 2017 waxaa ka mid ahaa Half Girlfriend (4.21 million shares), Badrinath Ki Dulhania (4.02 million shares), Ok Jaanu (3.65 million shares), The Ghazi Attack (3.42 million shares) iyo Judwaa 2 (3.39 million).
Waxaa Aqrisay 367
Wlll xatooyo nuucee ah sidee la isku dhaaf saday xogtoda na fhmsii adoo mahadsan